LG V50 5G: Voamarina ny vidiny sy ny fandefasana any Korea | Androidsis
Ny vidin'ny LG V50 ThinQ 5G dia voamarina any Korea
Eder Ferreno | | LG, Finday
Ny LG V50 ThinQ 5G dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny MWC taloha. Ny marika koreana dia namela antsika tamin'ity fomba ity niaraka tamin'ny finday avo lenta voalohany mifanaraka amin'ny tamba-jotra 5G. Izy ireo dia lasa iray amin'ireo marika voalohany amin'ny Android manana telefaona miaraka amin'ireo toetra ireo. Na dia tsy nanisy resaka momba ny vidiny aza izy ireo tamin'ny fampisehoana nataon'izy ireo, na ny daty fandefasana azy io.
Soa ihany fa tsy nila niandry ela be izahay. SATRIA Ity LG V50 ity dia havoaka amin'ny fomba ofisialy any Korea Atsimo. Nambara ny vidiny sy ny daty fandefasana telefaona ao amin'ny firenena. Sombim-baovao iray izay farafaharatsiny manampy antsika hahafantatra ny vidiny. Inona no azontsika antenaina?
Ny fandefasana azy dia tsy lavitra ny fanombohana ny Galaxy S10 5G. Tonga ny modely Samsung amin'ny 5 aprily any Korea Atsimo, amin'ity zoma ity noho izany. Raha ny LG V50 dia mila miandry herinandro maromaro ianao. Araka ny havoaka amin'ny fomba ofisialy amin'ny 19 aprily any amin'ny firenena aziatika. Efa voamarina.
Ny iray amin'ireo fisalasalana lehibe dia ny vidin'izany. Ity LG V50 ity dia mitentina 1,19 tapitrisa Won Koreana Tatsimo, izay 935 euro eo ho eo ny fiovana. Mihevitra izy fa somary mora kokoa noho ny telefaona Samsung io. Na dia amin'izao fotoana izao aza dia tsy fantatsika izay vidiny mety hitranga amin'ny fandefasana azy any Eropa. Mety ho tsy an'asa bebe kokoa.
Amin'izao fotoana izao, Korea Selatan no lasa tsena voalohany nanamafisana ny fandefasana azy. Hatreto tsy mbola nisy voalaza ny fanombohana an'ity LG V50 any Eropa ity. Na dia antenaina hitranga eo antenatenan'ny taona aza ity dia mety ho ofisialy amin'ny fahavaratra.
Farafaharatsiny, efa azontsika ny hevitry ny vidin'ny marika amin'ny findainao. Ankoatry ny telefaona, LG Dual Screen accessory dia amidy. Manana ny vidiny 219.000 won izy, izay manodidina ny 233 Euros ho takalony. Ka raha mividy ny telefaona sy ny kojakoja rehetra ianao dia hiafara amin'ny fandoavana 1.200 euro ny zavatra rehetra ho an'ny mpampiasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » LG » Ny vidin'ny LG V50 ThinQ 5G dia voamarina any Korea
Xiaomi dia efa nivarotra Redmi Note 4 maherin'ny 7 tapitrisa
Aleon'ireo Espaniola mandefa hafatra hiantsoana